Ny Sary Sokitra Jiro Kristaly
Asabotsy 3 Aprily 2021
Ny Sary Sokitra Jiro Kristaly Noho ny hazo sy ny kristaly quartz, ity sary sokitra maizina ity dia mampiasa kitay voarindra maharitra avy amin'ny tahiry hazo hazo Teak efa antitra. Nampahafantarina ny masoandro sy ny rivotra ary ny orana nandritra ny am-polony taona, ny kitay dia vita amin'ny tanana, vita amin'ny fasika, nodorana ary vita ho vata fampitaovana jiro LED ary fampiasana kristaly quartz ho toy ny diffuser voajanahary. Ny kristaly quartz 100% voajanahary dia ampiasaina amin'ny sary sokitra tsirairay ary manodidina ny 280 tapitrisa taona eo ho eo. Misy teknika fanamboarana hazo isan-karazany ampiasaina ao anatin'izany ny fomba fanao Shou Sugi Ban amin'ny fampiasana afo ho an'ny fiarovana sy ny loko mifanohitra.
Jiro Ny endrik'ilay jiro Capsule dia mamerina ny endrika misy ny kapôta izay tena miparitaka amin'ny tontolo maoderina: fanafody, rafitry ny maritrano, habaka, thermoses, fantsona, kapila-potoana izay mampita hafatra amin'ny taranany am-polony taona maro. Mety ho karazana roa izy io: fenitra sy elongated. Ny jiro dia azo amin'ny loko maro karazana misy fangaraharana isan-karazany. Ny fatorana amin'ny tady nylon dia manampy voka-tànana vita amin'jiro. Ny endriny ankapobeny dia ny hamaritana ny fahatsorana ny fanamboarana sy ny famokarana faobe. Ny fitahirizana amin'ny fizotran'ny famokarana jiro no tombony lehibe indrindra.
Sofa Trano Fisakafoanana Seza Ny Kafe Ny Sary Sokitra Jiro Kristaly Jiro